EX - ABSDF: May 2014
မြန်မာပြည်တွင်ခေတ်အဆက်ဆက်တက်လာသော သမ္မတများသည်.. .ကောင်းကြောင်း..အတုယုစံပြုစရာစိတ်ထား. ကိုယ်ကျင့်တရား များကို မည်သည့် ကျမ်းဂမ်လည်းမ၇ှိသလို စာအုပ်လည်းမရှိ၊ ဖတ်ဖူးခြင်းလည်းမရှိလို့ ဟုဆင်ခြေပေးအံ့....။ Read more »
ကျွန်တော် ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီထဲသို.၀င်တော.မည် ။ ဘယ်သူတွေဘာထင်ထင် ကျွန်တော်ဝင်မည် ။ ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတော.နောက်ခံရှိထားမှဖြစ်မည်
။ သူများတွေဝင်သောပါတီထဲသို.လည်း အုတ်အရောရောကျောက်အရောရော သူများလုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်ကာ ရောတိရောရာ မလုပ်ချင် ။ Read more »
ဧပြီလမှစ၍ ကုန်ဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာတက်လာသောကြောင့် ယခင်လို ဈေးဝယ်ရတာ
အဆင်မပြေတော့။ လက်ထဲတွင်ပါသော တစ်နေ့ စရိတ်နှင့် ဝယ်ခြမ်းရမည့် ဟင်းစားကို
တော်တော် စဉ်းစားရသည်။ ယခင်နှစ်များကမူ သင်္ကြန် ကျော်ပါက ဈေးပြန်ကျလေ့ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ဘယ်သို့ဖြစ်သည်မသိ။
မြန်မာနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားလောကမှာ အမှောက်အမှားတွေ၊ လူမှုပြဿနာတွေ ပိုမိုရှုတ်ထွေးလာစေတဲ့ လောဘသားစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့၊ တာဝန်မဲ့ အစိုးရရဲ့ သဘောထားတွေကို ထင်ဟတ်စေတဲ့ ဆောင်းပါး.. (သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်မှ ကူးယူသည်)
မိုးသီးဇွန်ကို မေလ ၂၅ ရက်၊ မိုးဟိန်းကို ဒီ့မတိုင်ခင် ၄ ရက်မှာ ဗမာပြည်ထဲကနေ
တိုင်းပြည်ပြင်ပသို့ပြန်ထွက်နေထိုင်ခိုင်းတဲ့ ရက်အပိုင်းအခြားများ နီးကပ်လွန်းတဲ့
ကိစ္စဟာ တမင် ချိန်ကိုက်ကြံစည်ထားတာပါ။ ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်
ဗမာပြည်ထဲ ၀င်ရောက်လာတဲ့နေ့ ရက်များကလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ
၁၃ ရက်နဲ့၇ ရက်နေ့ ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရပြီး တပတ်အတွင်း ရှေ့ ဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုသလို တိုက်ဆိုင်နေတာကလည်း နောက်ထပ်ထူးခြားမှုတခုပါ။
ခုနက Sky Net Myanmar Movies လိုင်းက လာတဲ့ မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေ၀င်သည်ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းမြန်မာဇာတ်ကား ကလေးကို ကြည့်နေမိတယ်။ မင်းသားက ကျော်ဟိန်း၊ မင်းသမီးက ချိုပြုံး။ ဇာတ်က ဘယ်လောက်နာသလဲတော့မမေးနဲ့။ စကတည်းက ကျော်ဟိန်းက ခါးပိုက်နှိုက်၊ ချိုပြုံးက ပြည့်တန်ဆာမ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီးဇာတ်နာစရာလည်း မရှိတော့ဘူးလေ။ ကျော်ဟိန်းက ခါးပိုက်နှိုက်ဘ၀မှာ ပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ ချိုပြုံးကို တွေ့တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးသားဟာ အပြန်အလှန် ဘ၀တွေအကြောင်း စားမြုံ့ပြန်ကြရင်းနဲ့ နားလည်မှုရသွားကြတယ်။ ယူဖြစ်သွားကြပုံကလည်း ချိုပြုံးက တင်တင်မြရဲ့ သီချင်းကလေးကို နှစ်ယောက်သားအတူထိုင်ဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးမှာ နားထောင်နေရင်းနဲ့ ခံစားသွားရတယ်ထင်ပါရဲ့ ။ Read more »
အိပ်ယာထက်မှလူးလဲထလိုက်မိသည့်ကျနော် ညကကောင်းစွာအိပ်မရ။ အတွေးများနှင့်နပမ်းလုံးရင်း ညဉ့်အတော်နက်ခဲ့ရသည်။ ယခုလည်း မဟာမိတ်တပ်မတော်တွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသော အကျဉ်းသားတစ်ဦးအား သွားရောက်စစ်ဆေးပေးရအုံးမည်။ အကျဉ်းသားကား မည်သူမည်ဝါရယ်မသိရသေးပေ။ Read more »
သုံးခွမြို့မှာ ဆောက်နေတဲ့ တံတား ဘယ်သူတွေ အတွက်လဲ (ပေးစာ)
ကျောင်းအပ်နှံရာတွင် ကျပ်သိန်းချီပေးရမှုအချို့ ရှိနေဆဲ
တပ်မတော်ကို စိန်ခေါ်ပြောဆို မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကော်မရှင်သတိပေး
ယဉ်လပ်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဟု စစ်တပ်အရာရှိ အတည်ပြု
အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်တွင် လူ ၃၀၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြ
ရဲနှင့် ပြည်သူဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရန် Open Daily အခမ်းအနား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးကျင်းပ
အနှစ်သာရအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို
အာမခံ သော ပြည်ထောင်စုဟူသည်အား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းရန်မြန်မာတပ်မတော်က
လက်ခံ လိုက် ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၂၂ ရက်တွင် သတင်းများ ထွက်ပေါ် လာသည်။
ယင်းကို သုံးသပ်ရန်လိုပါမည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို လက်ခံလျှင်
လက်ခံသည်၊ လက်မခံလျှင်လည်း လက်မခံနိုင်ပါ ဟု ရိုးရိုးပြောရုံသာ ဖြစ်သင့်သည်။ ဖက်ဒရယ်၏
အနှစ် သာရ ဟူသည်ကို ယူသော်လည်း၊ ဖက်ဒရယ် ဝေါဟာရ အတိ အကျကို မသုံး၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် သွားရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို
သဘောတူညီချက်မရပါက ယင်းမှာ လိမ်ဆင်ကြီးသာဖြစ်ပါမည်။
ကျွန်တော်နဲ့ နိုင်ငံရေး ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၄
ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ငါးနှစ်သားအရွယ်မှာမှ လူဘ၀ထဲရောက်လာရသူ တဦးဖြစ် ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ပြီးသွားပြီးမှမွေးတဲ့သူဆိုတော့ မဟာရန်ကုန်ကို စင်္ကာပူနိုင်ငံက အထင်ကြီးပြီး လာလေ့လာနေတဲ့အချိန်ကောင်းမှာ လူဖြစ်လာတဲ့သူပေါ့ဗျာ။ Read more »
Min We Hin
ဟား...ဟား... လျာကလေးထွက်ပြီး သာတဲ့ဘက်ယိမ်းတဲ့ ငါ့ကိုများ တရားဥပဒေဆိုလား ဆိုလေရဲ့
မတရားခြင်းတရားခြင်းတွေတော့ငါမသိ သာတဲ့ဘက်လျာထွက်ရတာက ငါ့ နိယာမ
ထိုင်းအာဏာသိမ်း စစ်တပ်မှ အာဏာရှင်ဟောင်း တက်စင် ချူနာဝပ် ၏ လက်ရုံးကြီးများအား တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး ဖမ်းဆီးနေ
Min Burma's status update.၂၃-မေ၊ ၂၀၁၄
တချိန်က တိုင်းပြည်ပိုင်ငွေများအား အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့လို
့ ထိုင်းတရားရုံးတော်မှ ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်စင် ချူနာဝပ် ဟာ အပြစ်ဒဏ်တွေကိုေ၇ှာင်လွဲကာ ပြည် ပနိုင်ငံသို့ထွတ်ပြေးတိမ်းေ၇ှာင်သွားခဲ့သော်လည်း တိုင်းပြည်အာဏာကို သူယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး သစ္စာခံလူတွေက တက်စင် ကိုပွားအဖြစ် ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်ထား ဆဲဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံသား အများစုက သိနေကြတာပါ။
Yannaung Soe ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က အင်းဝမြို့ ဟောင်း တစ်ခွင်ကို ထပ်ရောက်ဖြစ်တော့ ဆင်ကျုံးခံတပ်ကြီး ဆီကို ရောက်အောင် သွားခဲ့ပါတယ် ။ အရင်ခေါက်တွေတုန်းကတခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း တဲ့
နေရာတွေ ကိုသွားပြီး လေ့လာရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်ခဲ့တာမို့ အခုခေါက်ကျမှ ဆင်ကျုံး ခံတပ်ကြီးဆီကို အရောက် သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ရွံ့ကြောက်ရသည့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး (ငြိမ်း) ကွယ်လွန်ကြောင်း သတင်းထွက်ခြင်း မမှန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးများ၏ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ – မောင်ရေစက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းတစ်ခုမှာ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် စကားပြောနေကြတယ်။ သူတို့နိုင်ငံက အစိုးရတွေ အကြောင်း ပြောနေကြတာ။
တရုတ်လေးက ပြောတယ်... ... "ငါက တရုတ်ပြည်က၊ ငါတို့ အစိုးရက တို့တရုတ်ပြည်က မဟာတံတိုင်းကြီးနဲ့တူတယ်၊ အိုဟောင်းနေပေမယ် ကြံ့ခိုင်နေတုန်းပဲ"
ဒီမိုကရေစီ လူထုအုံကြွတောင်းဆိုမူကြီးကို စစ်တပ်က လက်နတ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ပြီး၊ အဆုံးသတ်စေခဲ့တာကတော့ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၁၉၈၈ မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့တာပါပဲ။ လိုက်လံဖမ်းဆီးလို့တိမ်းရှောင်ပြေးကြ၊ မတရားမှုကို မခံမရပ်နိုင်ကြသော ရဟန်း ၊ကျောင်းသားပြည်သူတို့ လည်း မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်၊ မြောက်ပိုင်း အစွန်အဖျားကိုထွက်ကြပြီး လက်နက်ကိုင်စွဲခဲ့ကြသည်။
May 22, 2014 at 6:40pm
စာရေးဆရာသည် တူသည်။ မတူ … ။"
ဆေးစက်၊ စောင်းကြိုးနှင့် ကတ္တီပါကားလိပ်' မှ - ကောက်နှုတ်ချက်)
NDF ပါတီခေါင်းဆောင် ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ကွယ်လွန်ကြောင်း
ကြားတော့ ၊ စာရေးသူမှာ ၊ ဘာစကားမှ မဆိုနိုင်….။ တွေးစရာ ရေးစရာ တွေကား လျှံကျသွားသည်။ ' ဖျတ် 'ကနဲဝင်လာသော ပထမအတွေးကား…..၊
" လက်ခုပ်သံထက် ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ရဲတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ
၊ ရှားသထက်ရှားသွားလေပြီကော…..။ "
စဉ့်ကိုင်မြို့ မှာ စစ်တပ်ပိုင်လယ်မြေတွေကို မူလပိုင်ရှင်တွေ ၀င်ရောက်ထွန်းယက် (ရုပ်/သံ)
ထိုင်းတွင် စစ်အာဏာသိမ်းကြေငြာအပြီး ညမထွက်ရအမိန့်ပါထုတ်ပြန်
ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားသူ၏ ရုပ်လောင်းအား သဂြုင်္ိဟ်ပြီး တစ်လအကြာတွင် တူးဖော်စစ်ဆေးရာမှ လူသတ်မှုပေါ်
လိမ္မော်ရောင်အဆင့် မုန်တိုင်းငယ် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်ပြီ
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အဆောင်၊ တိုက်ခန်းငှားရမ်းခများမြင့်တက်မှုကြောင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သူတို့ အခက်ကြုံ
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး (ငြိမ်း) ကွယ်လွန်သည့်သတင်းမမှန်ဟုဆို
၀ူခုံးဇာတ်ဆောင်ရဲ့ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး စတင်
ကြုံခဲ့ဖူးသော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများအကြောင်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုဆိုသည်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး အရိုးစွဲနေသော ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်၏။ ဟိုးရေSးပဝေသဏီက ပဒေသရာဇ်များခေတ်ကပါင် စတင်ခဲ့သည် ထင်ပါ၏။
ရှေးပုံပြင်တစ်ခုတွင် အခါတစ်ပါး၌ တံငါသည်တစ်ဦးသည် ဘုရင့်ထံ ငါးဝင်ဆက်သည်။ တံငါသည်ထံမှ ဆုငွေ တစ်ဝက်ပေးမှ ငါးဝင်ဆက်ခွင့်ပြုမည်ဟု တံခါးမှုးက ဆို၏။ လာဘ်တောင်းခြင်းပငါ။ တံငါသည်က သဘောတူမှ ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဘုရင့်ထံ ငါးဆက်သပြီး ဘာဆုလိုချင်သလဲဟု ဘုရင်က မေးသောအခါ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ ရိုက်ပါရန် တံငါသည်က ဆုတောင်းတော့၏။ ဘုရင်က နားမလည်းနိုင်ပဲ တံငါသည်တောင်းသည့် ဆုကို ပေးလိုက်၏။ အချက် ၅၀ပြည့်သောအခါ "ခဏရပ်ပေးပါဦး၊ ဆုတစ်ဝက် ခံစားမည့်သူရှိပါသေးသည်" ဟု တံငါသည်က ဆို၏။ " "ဘယ်သူလဲ" ဟုမေးတော့ ....... "တံခါးမှုးပါ" ဟု ဆို၏။
ကွန်းဇော် အညာမြေ's photo.
အဲဒါ ဒို့မောင်လေးလေ၊ အသက်က (၁၄-၁၅) ၀န်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်။ ခံယူချက်ပြင်းတယ် ၈၈ အပြီး မှာ ABSDF မြောက်ပိုင်း နဲ့ လိုက်သွားတာ"
အင်္ကျီ ရောင်းသူ ဆိုင်ရှင် အမျိုးသမီးကြီးက နံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ 10x14 ဆိုဒ် အရွယ်လောက်ရှိ ကူးစက်ကနေ ထုတ်ထားတာမကြာသေးတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို ညွှန်ပြရင်း ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်။ Read more »
ထိုင်းမှာ စစ်တပ်က မာရှယ်လော ကြေညာ
မီးဘေးသင့် တောင်ငူမြို့မဈေး ခေတ်မီဈေးသစ် ပြန်ဆောက်မည်
အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ်သစ် မိုဒီ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမယ်
ကျေးလက်နေ မိဘပြည်သူများအား ရမ်းကုများ လက်သို့ မအပ်နိုင်ပါ
တပ်မ ၇၇ လှုပ်ရှားရာဒေသအတွင်း စစ်မှုထမ်းဟောင်းတဦးသတ်ဖြတ်ခံရ
ရွှေစွမ်းရည် ပီနံအိတ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ထိုင်းကုမ္ပဏီကို ထားဝယ် တရားရုံးတွင် စတင် စစ်ဆေးမည်
ရဲတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သော ပလောင်ကျေးရွာပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွာသားများကိုဖမ်းဆီး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မိုးသီးနှံ ချေးငွေအတွက် အတိုးနှုန်း လျှော့ချပေးမည်
Soe Min May 18, 2014 at 10:11am
ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းထဲမှာ၊ မန္တလေးက အောင်ပင်လယ်မှာ အုတ်အုတ်သည်းသည်း မည်းမည်းမို့မို့ တခဲနက် အားပေးကြတဲ့ လူစုလူဝေးကြီးကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခါ ပြုံးပျော်အားရ ကြည်နူးမ၀တဲ့သူတွေရှိသလို မျက်နှာကြီးမဲ့မသွားအောင် ဘယ်လိုမှ အောင့်အီးစောင့်စည်းလို့ မရနိုင်ပဲ သွေးကျဆေးလေး ပြေးသောက်၊ ဟိုလူ့ငေါက် သည်လူ့ငေါက်၊ မြည်တွန်တောက်တီး၊ မီးခဲဖင်ကြားညှပ်မိသလို ထလိုက်ထိုင်လိုက် ရတက်ပွေနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တိဘက်-မြန်မာ လူမျိုးနွယ်စုကြီးမှ အကြီးဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သည်။
မနုဿသမိုင်းအရ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ နာဂ၊ သက်၊ ကမ်းယံ၊ ပျူ တို့နောက်မှ ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်း ပျူတို့ ထူထောင်သည့် ပထမပြည်ထောင်စုကို အေဒီ ၈ ရာစုတွင် နန်ကျောက်တို့က ဖျက်စီးပြီးချိန် မတိုင်မှီ ကပင် ရောက်ရှိနေထိုင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြပါသည်။